Isinguqunguqu ipolitiki yamazwe ngamazwe omhlaba - Bayede News
IYA ngokuguquka ipolitiki yamazwe ngamazwe lokhu kulandela izigameko zakamuva ezenzeke ezifundazweni ezehlukene. Lokhu kuguquka sekudale umcindiswano yize usengumshoshaphansi, phakathi kwamazwe nabaholi abehlukene. Ezwenikazi i-Europe kubonakala kushintsha izandla njengoba lowo obethwathwa ngomholi wamazwe ase-Europe uShansela u-Angela Merkel waseGermany esehlehlelwa zikhuni. Lo mholi ubaziwa ngokuthi kugcina izwi lakhe ezindabeni ezithinta amazwe akuleli lizwekazi. Lokhu kugqame kakhulu ngesikhathi epheka ngobhojwana iGreece eyabe isenkingeni yezimali. Imiphumela yokhetho lwaseGermany ibukeka imkhedamisile lo mholi ngoba kuphele izinyanga leliya lizwe lingenaye uhulumeni ngenxa yokungabi nokuvimelana phakathi kweqembu lakhe iChristian Democratic Union of Germany kanye namaSocial Democratic Party (SPD).
Kusuka lapho lo mholi osenehlandla lokugcina ube buthaka. Isikhundla sakhe sokuhola i-Europe kubukeka sizothathwa ngumholi waseFrance uMnu u-Emmanuel Macron njengoba amaNgisi nawo esaxakwe wutwayi lokuphuma ngaphansi kwe-European Union. Nakhona izinto zimapeketwane njengoba uNdunankulu uTerresa May ebukeka engenamandla njengoba iziphakamiso zakhe ePhalamende sezehlulwe amahlandla amabili okuyinto emenza abukeke ebuthaka. Olunye uguquko lubonakala odabeni oluthinta isivumelwano se-Iran kanye namazwe asentshonalanga ngonyaka we-2015. Lesi sivumelwane ngezikhali zenuzi sasayinwa ngesikhathi sokubusa kukaMnu u-Obama e-USA nokuthe angaphuma uMengameli omusha walibeka ngembaba ukuthi yena uzosichitha. Nokho kubukeka kungelula kangakho njengoba amazwe ayeyingxenye yalesi sivumelwane okuyiBritain, iFrance neGermany bethi bona basamile kulesi sivunelwano.
Lapha kakwaziwa ukuthi iyozala nkomoni njengoba uMengameli wase-USA encelisa amawele. Ngakolunye uhlangothi unesiﬁso sokuba nobuhlobo namazwe ase-Europe kanti ngakolunye uhlangothi ufuna ukuba muhle kubahlobo be-USA, i-Israel. Amazwe i-Israel ne-Iran yinkukhu nempaka. Ukuqinisekisa ukuthi uyanakwa ukwedlula abanye umholi wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu wenze okungejwayelekile ngesokhathi ebiza abezindaba ebatshengisa lokho akubize “njengobufazi” bokuthi i-Iran yasenga ezomithiyo nxa ingena esivumelwaneni. Konke lokhu kubukeka kungalethanga mehluko ngoba amazwe enza isivumelwano ne-Iran ngaphandle kwe-USA azibophezele esivumelwaneni. Esitatimendeni esikhishwe yiHhovisi likaNdunankulu uMay la mazwe athe asamile kulokho avumelana ngakho. Ngokusho kwesitatimende uMay ushayele ucingo abaholi baseFrance naseGermany nayilapho bevumelene khona ukuthi isivumelwano sizoqhubeka kwengeze nokunye okungenzeka ukuthi kuyadingeka. Ne-USA izwakale isimathintanyawo ekutheni ayifuni ukuzwa lutho ngesivumelwane.
Ekhuluma esitimeleni sokungcebeleka eMiddle East ngesonto uMike Pompeo uthe iWashington izolulaxaza olwenuzi ngaphandle uma izingxoxo nabalingani base- Europe zisimama. “Sesihambe ibangana nabase-Europe,” ephawula. “Kusenomsebenzi okufanele wenziwe. Bathe, ‘Kuhle sizokweseka uma kutholakala ikhambi.” INorth Korea iguqule umdlalo Uguquko olukhulu lubonakale eNorth Korea lapho umholi wakhona uKim Jong Un obeliqaqa kuthangi namuhla esephenduke inoni kubaholi bamazwe kanye nabezidaba. UMengameli u-Un uqale into ebingalindelwe muntu, ukubuyisana phakathi kweNorth Korea kanye neSouth Korea. Lokhu kwenzeke emuva kwemizamo yomengameli nabaholi bamazwe ehlukene. Ephawula ngalokhu ungoti uTravis Jeppesen uveze ukuthi abaholi bala mazwe baqale into ekade kwasa beyiﬁsa nathe sekulele ezakhamuzini ukuba zidonsa zibhekise ngalapho laba baholi belibangise khona, nokuwukuletha uxolo, ukuthula kanye nokusebenzisana kula mazwe womabili.
Ukwenaba kweChina neRussia kugagazisa i-USA
“Kufanele sikubonge ukuhlangana kwalaba baholi njengoba la mazwe abengabhekani kusuka ngowe-1945. Siﬁsa ukukushayela izandla lokhu ngethemba lokuthi zonke izingqinamba nezinkinga la mazwe abhekene nazo, kuzoshabalala kuqhutshekwe nempilo,” usho kanje uJeppesen. Okutuswa kakhulu yindlela uMengameli waseNorth Korea enze ngayo. Phezulu eqhulwini wukuba nomhlangano noMengameli waseSouth Korea nokugcine ngokuthi aphimise elokuthi impi phakathi kwala mazwe womabili isiphelile. Akagcinanga lapho kepha usondeze isikhondlakhondla esiyiChina eduze kwakhe ukuze athi lapho eyohlangana noTrump angabi lula. Lokhu kube wubuhlakani ngoba wazi kamhlophe ukuthi iSouth Korea ihambisana ne-USA neJapan. Omunye umhlobo azomvulela umnyango yiRussia nazi kahle ukuthi uma ephethe yona neChina uyobe enamalungu amqoka eNhlanganweni Yezizwe ikakhulukazi kuMkhandlu Wezokuphepha.
Yize uTrump engazigonya isifuba athi nguye owenze kube nezingxoxo iqiniso lithi ophumelele lapha nguMengameli waseNorth Korea okwazile ukuqinisekisa ukuthi izwe lakhe liba setafuleni lezingxoxo okuyinto akade eyilangazelele. Umdonsiswano weRussia nawasenthsonalanga awukazi kuphela kepha uzokwenza amazwe omhlaba aphoqeleke ukuba akhethe izinhlangothi ngengoba kwakunajlo njengazekhathi zempi ayi yilwa buthule (cold war) nayilapho umhlaba wahlukana phakathi kukhona abaseka i-USA nalabo abaseka iRussia.
Bayede News May 4, 2019